काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएपछि नेपाल र भारतबीच सम्बन्धमा तिक्तता आएको छ । दुवै देशबीच कूटनीतिक सम्बन्धमा पूर्णविराम लागेको छ । दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यलाई भेट्न साउथ ब्लकले इन्कार गरेको छ । दुई देशबीच कुनै पनि स्तरमा कुराकानी भएको छैन । यसले आगामी दिनमा नेपाल र भारतबीच सम्बन्धमा ठूलै दरार आउने संकेत देखिएको छ ।
भारत र नेपाल दुवैतिर अहिले लकडाउन छ । भारतले जेठ १८ गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएको छ । नेपालले जेठ २० गतेसम्म लकडाउन थपेको छ । दुई देशका सीमा बन्द गरिएको छ । भारतबाट आउने नेपालीबाहेक अन्य गाडी सीमा रोकिएका छन् । खाद्यान्न, औषधिलगायतका सामग्री भारतबाट आउन रोक लागेको छैन ।
सत्तारुढ दल नेकपाकै एक नेताले भारतीय पूर्वराजदूत श्यामशरण काठमाडौंमा आएको र उनी नागपोखरीस्थित होटल मेरियटमा रहेको सूचना चुहाएपछि मंगलबार बिहानदेखि सामाजिक सञ्जाल रंगिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले नयाँ नक्सा जारीपछि संविधान संशोधन हुन लागेका बेला किन श्यामशरण काठमाडौं आए ? कसले बोलायो ? लकडाउनमा काठमाडौंसम्म कसरी आए ? डेट एक्सपायर कूटनीतिज्ञलाई किन भ्यालू दिइयो ? भन्ने जस्ता प्रश्न उठाइएको छ ।
तर, भारतीय दूतावास स्रोतले भने श्यामशरण काठमाडौंमा आएको भन्ने विषयबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । ‘श्यामशरणज्यू काठमाडौंमा आएको भन्ने खबर हामीले पाएका छैनौं,’ दूतावास स्रोतले भन्यो । श्यामशरण नेपालप्रति निकै कडा व्यवहार गर्ने पूर्वराजदूत हुन् । नेपालमा जति पनि भारतीय हस्तक्षेप भएको छ, त्यसमा श्यामशरणको भूमिका बढी मानिन्छ ।